🥇Iiyure zeMarike ye-Forex-Isikhokelo kwiiSeshini zokuRhweba ngeFX ngoJanuwari ka-2022
Iiyure zeNtengiso ye-Forex-Isikhokelo kwiiSeshini zoRhwebo zeFX
Wonke umntu ujonge elona xesha lilungileyo lokurhweba ngezezimali. Nangona kunjalo, ngeemarike ezingalali ngokwaneleyo, iiyure zokonga emini, kunye notshintshiselwano olufumaneka kwiindawo ezahlukeneyo zokuthathela ingqalelo-ukwazi nini Ukuthengisa i-forex kunokuba yinto edidayo.
Kananjalo, kubaluleke kakhulu ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo kweeseshoni ezahlukeneyo ze-forex- kwaye kubalulekile xa zivuleleke kwishishini.
Ukuba le yinto ujonge ukuyiphonononga ngakumbi-funda!
Kuthetha ntoni ngo Iiyure zeMarike ye-Forex?
Imarike yotshintshiselwano lwangaphandle iqhuba iiyure ezingama-24 ngosuku kunye neentsuku ezisi-7 ngeveki. Abantu abathengisa kuyo babandakanya amaziko emali afana nabaphathi behedge fund, iibhanki ezinkulu eziphambili, iinkampani kunye nabaphathi botyalo-mali. Emva koko unabarhwebi bakho abaphakathi kweJoe- abaziwa ngokuba ngabathengi.
Ukuze iimarike zotshintshiselwano lwangaphandle luvuleke phantse rhoqo, utshintshiselwano luya kuwela, luvule kwaye luvale kuyo yonke iveki ngamaxesha ahlukeneyo emini. Kananjalo, kunokuba nokudideka ukuzama ukuqonda ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo lokurhweba ngezezimali, kwaye zeziphi iimarike ezivulekileyo, okanye ezona zinokungazinzi kwindawo yakho yexesha.
Global Iiseshoni zeNtengiso ye Forex
Siza kugcina izinto zilula ngokusebenzisa i-GMT njengendawo emiselweyo yexesha kuso sonke esi sikhokelo, ukuze ungeze okanye uthabathe iiyure ngokuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo.
Njengoko besesitshilo, iindawo zentengiso zihlala zivulekile kwaye zivalwa ngamaxesha ahlukeneyo. Ngale nto engqondweni, apha ngezantsi uzakufumana iiseshoni ezinkulu ezine kwihlabathi liphela. Ngokubalulekileyo, uyakuqaphela ukuba yonke imakethi ityhila ubuncinci ngeyure enye-ukugcina amavili ehamba.
Iiyure zaseTokyo / zaseAsia zeNtengiso yeXabiso
Ukuqala kweveki yokurhweba kukhatywa ziimarike zaseAsia, zihlala zibizwa ngokuba ziiseshoni zeTokyo. Iimarike ezinkulu zaseTokyo ziqala ukusebenza phakathi kwentsimbi ye-00: 00 neye-06: 00. Ngokukodwa, ukuqala kunye nokuphela kweemarike zaseAsia zihlala zandiswa ngaphaya kweeseshoni zaseTokyo.
Oku kuhlala kuvula ukususela ngo-23: 00 kude kube ngu-08: 00. Oku kulungiselela imisebenzi yeemarike ezisasazekileyo kulo lonke elaseRashiya, eNew Zealand, eChina nase-Australia - nazo ezisebenzayo ngeli xesha.
Ezinye zezibini eziphambili ezithengiswayo ngexesha leeseshoni zaseAsia zibandakanya i-AUD / USD, i-USD / JPY, kunye ne-NZD / USD. Ke ngoko, ukuba uthengisa isibini semali esibandakanya i-JPY kwaye, uya kuqaphela imiqulu emikhulu kakhulu kwezi yure.
I-London / iYurophu yeeYure zokuThengisa zeMarike
Ngaphambi nje kokuvalwa kweemarike zaseAsia esele zikhankanyiwe, abantu baseYurophu bayaphila. Ngelixa iiyure ezisemthethweni eLondon ingu-07: 30 kude kube ngu-15: 30-iiseshoni zigqitha ngaphaya koko ziqala ngo-07: 00 kude kube ngu-16: 00. Oku kukuvumela ubukho botshintshiselwano olunje ngeJamani, France, kunye nezinye ezininzi.
Ixesha lokudibana phakathi kweeyure zentengiso yaseLondon kunye neNew York kukholelwa ngokubanzi ukuba lelona xesha lifanelekileyo lokufumana ukuqonda kwicala kunye nokuguquguquka kweemali zosuku lokuthengisa. Kananjalo, abathengisi abaninzi be-forex bakhetha ukuyikhwela de kube kuvalwa iimarike zaseTokyo naseSydney kwaye iLondon ivula.
INew York / Amantla eMelika Iiyure zokuThengisa ngeMarike
Iiyure ezininzi emva kokuba iimarike zaseAsia zivaliwe, kwaye zijikeleze isiqingatha kwiiseshoni zaseYurophu, iimakethi zangaphambili zaseMelika zaseMelika ziyaxhuma ziye kusebenza. Ukuthatha ikamva lezemali, ukukhutshwa kwezoqoqosho, kunye nezinto yorhwebo zithathelwa ingqalelo-kwirekhodi ezi marike ziqala ngo-12: 00.
Kananjalo, kukho umsantsa omkhulu phakathi kwexesha lokuvalwa kweemarike zaseMelika, kunye nexesha lokuvula kwakhona kweemarike zaseAsia. Ngo-20: 00, iNew York Stock Exchange ivala ngokusesikweni.
Iiyure zeSydney Forex Market
Ngo-21: 00, kanye emva kokuba i-NYSE ivaliwe, iimarike zaseSydney zivulekile-zivala kwakhona ngo-05: 00. Ngeli xesha, iimarike zaseTokyo ziyaqhuba kwaye ziyasebenza.
Iiyure zentengiso zaseSydney zihlala zithathwa njengezona zincinci zingathandabuzekiyo, kwaye ngenxa yoko azilungelanga abathengisi bexesha elifutshane abanqwenela ukuzibandakanya kwi-scalping kwaye njalo.
Iiyure zeMarike: Ixesha lokonga iMini
Kubalulekile ukuba wazi ukuba i-DST (iMini yokuGcina iMini) iya kuchaphazela iiyure zentengiso ye-forex. Kananjalo, ukukhumbula ukuba amawotshi abuyela umva okanye uye phambili kuya kukunceda xa uzama ukuqikelela iimarike. Ngelixa uninzi lwe-Mpuma ye-Asiya alibonisi ixesha lokonga ilanga, iimfumba zamazwe ziyawenza.
Umzekelo, akukho luncedo ekufundeni itshathi yesibane ebonisa ixesha elithile njengeyure e-1, iyure ye-4, okanye yonke imihla- kuphela ukuqonda ukuba ulinganisa ixesha elibekiweyo kuba elo lizwe libuyile umva okanye laqhubela phambili yure!
Uninzi lweeyure zoThengiso lweeMali eziManyanisiweyo
Xa iimarike zeAsia zivula malunga nentsimbi ye-00: 00, kuyacetyiswa ukuba ii-newbies ziyeke ukurhweba. Ngapha koko, abathengisi bemali abaninzi abanamava amashumi eminyaka bayazibamba ekubekeni iiodolo kwezi yure zimbalwa zokuqala.
Kungenxa yokuba ukuhlawula amatyala aphantsi kuhlala kubangela ukungazinzi, okuthi emva koko kubangele urhwebo olunobungozi kunye nokusasazeka okubanzi.
Uninzi lweeyure zeNtengiso yeLototho
Xa kufikwa kumba wokuhlawula amatyala, ukubuyisela endaweni, ukubuyela umva, kunye nokukhula ngamandla - oku kuyeyona yomeleleyo ngexesha leyure ezi-2 okanye ezi-3 zokuqala kuvulo olukhulu lwentengiso. Cinga kwimigca yaseLondon / yaseYurophu okanye eNew York / eMntla Melika.
Ewe kunjalo, ukungazinzi akusoloko kuyinto embi kulo mdlalo. Kananjalo, unokufuna ukubamba amanye amathuba anenzuzo ngokurhweba ngexesha le-TOTH (Phezulu kweYure).
Oku kuyaziwa phakathi koluntu lwentengiso kwaye kubhekisa kwimizuzu yokuqala neyokugqibela emi-5 yeyure nganye ngosuku lokuthengisa. Ngeli xesha uyakufumana ukuguquguquka okuphezulu kunye nokuhla kwexabiso okunamandla.
Iiyure zeNtengiso ye-Forex-Ezantsi
Xa kuthengiswa i-forex, isiphelo esicacileyo sokwenza inzuzo kukubeka ixesha elifanelekileyo kwiimarike. Kananjalo, ukwazi ukuba iseshoni enye ivala nini kwaye enye iqala kuya kukunceda kungabi nasiphelo - njengoko uya kuba nakho ukulinganisa ukungazinzi kwaye kuxhomekeke kwisibini esikhethiweyo seFX.
Kananjalo nokusebenza iiyure zentengiso ye-forex ngendlela efanelekileyo kwindawo yakho yexesha, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba naluphi na utshintsho kwiXesha lokuGcina iMini lunokuchaphazela iseshoni yokuvula kunye neyokuvala iiyure. Ke ngoko, kuya kufuneka uhlengahlengise naliphi na ixesha lamaxesha amaxabiso ojonge kuwo ngokufanelekileyo.
Ngaba ndingarhweba nge-forex emva kweeyure?
Ewe, i-forex inokuthengiswa ngeeyure ezingama-24 ngosuku ngenxa yeeseshoni zentengiso kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kunye namaxesha abekiweyo.
Zithini iiseshoni eziphambili zeemarike zangaphambili?
Zine iindlela zokutshintshiselana eziqwalaselwa ukuqhuba iiseshoni eziphambili ze-forex. Oku kubandakanya iTokyo / iAsia, iNew York / iUS, iLondon / iYurophu neSydney.
Kutheni le nto ukusasazeka kubanzi ngexesha lasebusuku?
Ukusasazeka kwi-forex kuya kuhlala kubanzi ebusuku kuba bambalwa abantu abathengisayo- kwaye ngenxa yoko imali encinci.